Maxaad Ka Taqanaa Cudurada Laga Qaaddo Qabowga? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — December 14, 2019
Qabowga waa cudur aanan la ogayn balse qodobadaan hoose ayaa ah kuwa loo baahan yahay inaad nala fahanto.
Waxa aan maantay ka hadleynaa hoos u dhaca heer kulka-jirka aadanaha ee Afka qalaad loo yaqaano (Hypothermia).
Hoos u dhaca heer-kulka jirka aadanaha waa xaalad caafimaad daro oo qatar ah, waxa ayna halis galin kartaa nolosha shaqsiga. Xaaladan waxa ay dhacdaa marka uu hoos maro heer-kulka jirka Aadanaha 35.0Co.
Waa Maxay Calaamadaha Lagu Garto Hoos U Dhaca Heer –Kulka Jirka Aadanaha?
Qofka oo lagu arko jarees badan.
Qofka oo ay ku adkaato in uu hadlo.
Garashada ruuxa oo hoos u dhac ku imaado, sida in uu dadka kale garan waayo.
Garaaco wadana oo yaraado.
Neefta ruuxa oo is badasho sida in uu qofka neef qoto dheer neefsado.
Maxaa Sababo Hoos u dhac heer-kulka jirka Aadanaha?
Xilliga qabowga oo uu qofka heli waayo dirimaad badan. Sida haddii uu qofka joogo dhulka uu barafka ka da’o in uusan ka gaashaaman ama uusan qaaddan jaakadaha qabowga loo xirto, waxa ay sababtaa hoos u dhac heer-kulka jirka.
Cudurada qaar waxa ay sababaan hoos u dhaca heer-kulka jirka Aadanaha waxaana kamid ah: Cudurka Macaanka, Nafaqo-darada iyo Cudurka faaliga (Stroke).
Dadka Da’dda ah iyo ilmaha yar ba waxa ay u nugul yihiin in ay ku dhacdo hoos u dhaca heer-kulka jirka Aadanaha.
Maxaa Lagu xalin karaa Hoos u dhaca heer-kulka jirka Aadanaha?
Qofka in laga daboolo qabowga.
In laga joojiyo faleenbo haddii ay ku socotaa markaa.
In laga qalijiyo qoyaanka qabowga uu keenay.
In la siiyo ruuxa cunno diiran
Ilmahana waxaa wanaagsan in lagu qabto laabta ayado waliba aan ka xigin wax maro ah ( Skin to Skin Contact), si uu cunagga u helo dirimaad.
Tags: Maxaad Ka Taqanaa Cudurka Laga Qaaddo Qabowga?
Next post Xisbiyada iyo Bulshada Diyaar Ma u yihiin Doorashada 2020?
Previous post Dadka Ma Iscafiyaan? - Qalad marka lagaa galo maxaad sameysa?